China pvc counter-rotating kambana extruder UA-162473191-1 mpanamboatra sy mpamatsy | Masinina manankarena
Extruder visy kambana mifanohitra amin'ny rotaka PVC UA-162473191-1
Ny extruder kambana mifanohitra mifanila dia nohavaozina tamin'ny 18: 1 ka hatramin'ny ankehitriny 26: 1. Ho an'ny fivoaran'ny teknolojia famolavolana volo sy ny teknolojia famokarana volo, ny fepetra takiana ambony dia napetraka amin'ny fifehezana ny fifandanjanan'ny mari-pana amin'ny vodin-tsolika .
Ny extruder kambana mifanohitra mifanila dia nohavaozina tamin'ny 18: 1 ka hatramin'ny ankehitriny 26: 1. Ho an'ny fivoaran'ny teknolojia famolavolana volo sy ny teknolojia famokarana volo, ny fepetra takiana ambony dia napetraka amin'ny fifehezana ny fifandanjanan'ny mari-pana amin'ny vodin-tsolika . Ny fitomboan'ny halavan'ny fizarana plastika sy ny fizarana fandrefesana mitovy tantana dia miantoka ny fitrandrahana tsy miovaova sy ny fametrahana plastika feno amin'ny fitaovana ary manatsara ny kalitaon'ny vokatra. Ny fahombiazan'ny visy kambana fisaka sy ny fomba fanodinana barika loaka roa sosona dia nanonitra tamin'ny fomba mahomby ny sasany amin'ireo lesoka kambana avy any ivelany.
extruder kambana mifanohitra mifanindran-dàlana manokana ho an'ny fitaovana PVC, ho an'ny vovoka PVC, granules PVC rehetra afaka miasa. na amin'ny fitaovana mifangaro. tsara ho an'ny plastika vita amin'ny PVC izy io. ho an'ny mombamomba ny PVC amin'ny alàlan'ny volo kambana mifanitsy dia safidy tsara indrindra. manana mpanjifa mahomby isika mihazakazaka ity milina ity any Eropa.
Amin'ny alalàn'ny famolavolana teknika manara-penitra sy feno famolavolana ary fitaratra manokana natokana ho an'ny fanindronana maharitra sy fihenan'ny tavy avo lenta, azo antoka ny ain'ilay extruder. Ny firafitry ny fitambarana malefaka dia mitaky fahafaham-po ny fepetra takian'ny mpampiasa ho an'ny extruder
Ny antsipirian'ny extruder mifanila dia afaka mifandray aminay info@zjgrcmc.com